တရားဓမ္မ Archives - MinSayYar
သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၄ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ မေတ္တာစာ ဒကာဒကာမများအားလုံးအတွက် မိုင်းကျက်ဂူမှ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်၏ မေတ္တာစာ ဆရာတော်လည်း နေ့စဉ်နှင့်အမျှ ကျန်းမာပကတိ တရားဓမ္မနဲ့အတူ ချမ်းသာစွာရှိပါ၏။ ဆရာတော်အတွက် စိုးရိမ်မှု ကင်းရှင်းကြပါစေ။ နိဗ္ဗာန်တစ်ခုတည်းကိုသာ ရည်ရွယ်၍ မဇ္ဈိမပဋိပဒါစိတ်ထားကာ သတိပဋ္ဌာန် တရားဘာဝနာများကို ပွားများလျက်ပါ။ မမေ့မလျော့ မပေါ့မဆဘဲ သတိတရာဖြင့် ရုပ်နာမ်ခန္ဓာရဲ့ ဖြစ်မှု ပျက်မှုကို ရှုမှတ်ပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်မြင် ဖြစ်ပျက်မုန်း ဖြစ်ပျက်ဆုံးအောင် ကြိုးစားလျက်ပါ။ ခဏိကမရဏ ခဏိကနိဗ္ဗာနကို ဆိုက်အောင် ကြိုးစားပါတယ်။ ဉာဏ်တရားဖြစ်နေတဲ့အချိန် လောဘ၊‌ဒေါသ မောဟတွေ ကင်းစင်ပြီး စိတ်လည်း တဒင်္ဂ ငြိမ်းချမ်းမှု ပေါ်ပါတယ်။ ကာယလဟုတာ ကိုယ်ခန္ဓာပေါ့ပါးမှု စိတ္တလဟုတာ စိတ်ရဲ့ ပေ့ါပါးမှုဆိုတာ အခိုက်အတန့်ပါ။အရာရာအားလုံး အနိစ္စ ဒုက္ခ အနတ္တသင်္ခါရသဘောတရား […]
24th November 2020 Editor
ချစ်သူ/ဇနီးမောင်နှံတွေ ဘဝဆက်တိုင်း အတူတူဆုံနိုင်မယ့် ကုသိုလ်
ဘဝတိုင်း ဆုံချင်လျှင် အခါတပါး၌ မြတ်စွာဘုရားသည် ဘဂ္ဂတိုင်း သုသုမာရဂိရိမြို့တွင် သီတင်းသုံးတော်မူစဉ် နကုလပိတာ နကုလမာတာ အမည်ရှိသော သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံအိမ်သို့ ကြွတော်မူသည်၊ သူကြွယ် ဇနီးမောင်နှံတို့သည် မြတ်စွာဘုရားအား ရိုသေစွာရှိခိုးလျက် သင့်လျော်သောနေရာ၌ ထိုင်နေကြပြီးလျှင် နကုလပိတာ သူကြွယ်က ဤသို့လျှောက်သည်- မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်သည် အသက်ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် ငယ်ရွယ်သူဖြစ်သော နကုလမာတာနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်၊ လက်ထပ်သည့်အချိန်ကစ၍ ယနေ့အထိ နကုလမာတာကို ကျော်လွန်ပြီး အခြားသော မိန်းမများထံ စိတ်ရောက်ဖူးသည်ဟု တခါမျှ မရှိခဲ့ဘူးပါ၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက် ကျူးလွန်မှုကား ဆိုဖွယ်ရာပင် မရှိတော့ပါ၊ မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်တို့သည် ယခုဘဝ၌လည်း အချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီး နောင်ဘဝသံသရာ၌လည်း အချင်းချင်းတွေ့ဆုံရန် အလိုရှိကြပါသည်ဘုရား။ နကုလမာတာကလည်း လျှောက်ပြန်သည်- မြတ်စွာဘုရား တပည့်တော်မ ငယ်ရွယ်စဉ်ကပင် နကုလပိတာနှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်၊ […]
မင်းကွန်းဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားသည့် သံဃာနှင့် ငွေအသပြာ အကြောင်း သံဃာ့ဖခင်ကြီးတွေ ကိုယ်တိုင်က မတားမြစ်ခဲ့တာကို ကိုယ့်ကျမှ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်မနေကြနဲ့။ (မင်းကွန်း တိပိဋက ဆရာတော်ကြီး၏ သြဝါဒ) တစ်ခါက ရန်ကုန် ပဉ္စနိကာယနိကာယ် စာမေးပွဲ စာအောင်ပူဇော်ပွဲ အတွက် သြဝါဒါစရိယဆရာတော်ကြီးများနှင့် အသင်းလူကြီးများ စည်းဝေးပွဲတွင် တိပိဋက ဆရာတော် ပခုက္ကူ ဦးနေမိန္ဒ-က စာအောင်သံဃာအား ပူဇော်ရာတွင် အပ်စပ်သော… စာအုပ်,သင်္ကန်း စသည်တို့ဖြင့်သာ ပူဇော်ရန်၊ မအပ်စပ်သည့် နဝကမ္မဝတ္ထုငွေတို့ဖြင့် မပူဇော်ရန် အကြံပြုပါသည်။ ထိုအခါ – မင်းကွန်းတိပိဋကဓရ ဆရာတော် ဦးဝိစိတ်တသာရာဘိဝံသ-က နဝကမ္မဝတ္ထုငွေဟာ စိတ်ထားတတ်သူတို့အတွက် အပြစ်က နည်းတယ်။ သာသနာအတွက် အကျိုးက များတယ်။ ဒါ့ကြောင့်…. သာသနာ အတွက် အကျိုးများရာကို ကြည့်ပြီး […]
ရဟန်းတွေ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမယ့် (၂၂၇) သွယ်သော ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်များ
ရဟန်းတွေ စောင့်ထိန်းလိုက်နာရမယ့် (၂၂၇) သွယ်သော ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်များ ဝိနည်းပိဋကတ်ကို ရဟန်းတို့ လိုက်နာရန် စည်းကမ်းများ (သိက္ခာပုဒ်)ဟု ပြန်ဆိုနိုင်သည်။ “ဝိနည်းသည် သာသနာတော်၏ အသက်”ဟု ဆိုထား၏။ ဝိနည်းပိဋကတ် သည် မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ သာဝကရဟန်းတော်များ လိုက်နာကျင့်ဆုံးဆောက်တည်ရန် ပညတ်တော်မူခဲ့သော ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်များ ဖြစ်သည်။ ထိုသိက္ခာပုဒ်တို့တွင် ဘိက္ခုပါတိမောက်၌ ပါရှိသော ၂၂၇-သွယ် သိက္ခာပုဒ်တို့သည် ရဟန်းတော်တို့အတွက် အခြေခံကျသော အရေးကြီးသည့် ဝိနည်းများဖြစ်သည်။ ၁ ။ မေထုန်မကျင့်ရ။ (မဆက်ဆံရ) ၂ ။ သူတပါးဥစ္စာမခိုးရ။ ၃ ။ လူမသတ်ရ၊ မသတ်ခိုင်းရ။ ၄ ။ ဈာန်မဂ်ဖိုလ်မရဘဲ ရသည်ဟုမပြောရ။ ၅ ။ သုတ်မလွှတ်ရ။ ၆ ။ အမျိုးသမီးဟူသမျှ မကိုင်ရ။ ၇ […]
ဘုန်းကြီးတွေကို ဝေဖန်ရင် ငရဲကြီးလား? (ပါချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တဒေါက်တာအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝံသ)
ဘုန်းကြီးတွေ ဝေဖန်ရင် ငရဲကြီးတယ် ။အပြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဟုတ်သလား ! လူပုဂ္ဂိုလ်တွေက ဘုန်းကြီးတွေကို လုံးဝေဝဖန်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူးလား မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းဖြစ်ပြီး အဖြေကိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖြေကြားပေးမှ ကောင်းမယ်လို့ထင်မြင်မိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုဟာ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်တတ်ကြသလို ဝေဖန်သူရှိရင်တောင် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတစ်ဦးသဖွယ် ရှု့မြင်တတ်ကြလို့ပါ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် ကလေးဘဝထဲက ငရဲကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားနဲ့ ကြီးပျင်းလာခဲ့ရတာမို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မှန်ရင် အားလုံးနီးပါးက ငရဲကြီးမှာ ကြောက်ကြတာ ဆန်းတော့လဲ မဆန်းပါဘူး။ မြတ်စွာဘုရားရှင်က ဝိဘဇ္ဇဝါဒတော်ရှိပေမယ့် ရှင်ရဟန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဘာသာဝင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တိုင်ဝေဖန်ရေးလုပ်ရမှာကိုလည်း သေမလောက်ကြောက်ကြသလို အဝေဖန်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်လည်း ငါ့ကို ကောင်းစေချင်လို့ အပြုသဘောဝေဖန်တာလား ဂုဏ်သိက္ခာ ညှိုးနွမ်းအောင်လို့ အပျက်သဘောကဲ့ရဲ့အတင်းဆို ရှုတ်ချပြီးပြောတာလားဆိုတာကို မဝေခွဲတော့ပဲ `မင်းကတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းနေလို့လဲ!ဆိုတဲ့ စကားလုံးကြမ်းကြမ်းတွေနဲ့ ပြန်လည်တုန့်ပြန်တတ်ကြပါတယ်။ […]
3rd November 2020 Editor
ရေးသားသူ – တော်ဝင်နွယ် အရှင်မဟာကဿပ မထေရ်မြတ်ဟာ ဓုတင်အရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ တတိယ မဟာသာဝကကြီးတစ်ပါး ဖြစ်တော်မူ ပါ တယ်။ လွန်လေပြီးသောအခါ ကမ္ဘာတစ်သိန်းထက်က ဓုတင်အရာမှာ ဧတဒဂ်ရတဲ့ အရှင်မဟာနိသဘမထေရ်ကို ကြည်ညို အား ကျကာ ပဒုမုတ္တရ မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ထံတော်မှာ ဆုထူးပန်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပါရမီတော်တွေကို ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ဖြည့် ဆည်းတော်မူခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အရှင်မဟာကဿပမထေရဲ့ အတိတ်ဘာဇာတ်ကြောင်းနဲ့ ပစ္စုပ္ပာန်ဘ၀ အချင်းအရာတွေဟာ အင်မတန် ဆန်းကြယ် အံ့သြဖွယ်တွေဖြစ်သလို လွန်စွာမှလည်း ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်လှပါတယ်။ အမရပူရ(တောင်မြို့) မဟာဂန္ဓာရုံဆရာတော် အရှင်ဇနကာ ဘိဝံသက ” မြန်မာပြည်က ထေရုပ္ပတ္တိတွေဟာ လူလို မရေးကြဘူး။ နတ်လို ရေးနေကြတယ်။ ငါ့ကတော့ ငါရဲ့ထေရုပ္ပတ္တိကို လူလိုပဲရေးမယ်”လို့ တစ်ချိန်က မိန့်ကြားတော်မူခဲ့ဖူးပါတယ်။အရှင် မဟာကဿပမထေရ်ရဲ့ ထေရုပ္ပတ္တိကို […]
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား၏ မေတ္တာစာ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၄ သီတင်းကျွတ်လဆန်း ၁၅ ရက် (၃၁၊ ၁၀၊ ၂၀၂၀) မိုင်းကျက် မဟာမုနိဓမ္မဟိန်းဂူမှ ဒကာဒကာမများနှင့် သားတပည့်များအား ပေးပို့သည့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား၏ မေတ္တာစာ လူသူမနီး တောနက်တဲ့ မိုင်းကျက်ဂူကြီးထဲမှာ ဆရာတော်ဘုရားလည်း ကျန်းကျန်းမာမာ ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ တရားဘာဝနာတွေကို ပွားများ အားထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒုက္ခခံစားရတာ တူနေကြတဲ့ သတ္တဝါတွေအပေါ် ဥပေက္ခာတရား ထားသင့်တဲ့ဟာထား မေတ္တာတရား ပွားပေးလျက် ဒီဂူထဲမှာ အဓိဋ္ဌာန်လာရောက် ဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်လည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာလျက် သဘာဝတရားနှင့်အညီ အိုခြင်းဇရာနဲ့အတူ ဖြတ်သန်းနေရပါတယ်။တရားဘာဝနာ အားထုတ်ရတာလည်း အတော်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါတယ်။ နေ့စဉ် သစ္စာအမှန်တရားနဲ့အတူ ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။ နောင်တရစရာ အကြောင်လဲ မရှိပါဘူး။ လိုချင်တောင့်တ စိတ်လဲ မရှိပါဘူး။ လျောင်း […]
Written By Venerable Ghosaka ၁) ‘ဟေ ! ဇောတိက … မင်းတပည့်တွေနဲ့ ငါကို စစ်ထိုးခိုင်းပြီး မင်းက ဘုရားကျောင်းမှာ ရှောင်တိမ်းနေတာပေါ့ ဟုတ်လား’ ‘မင်းကြီး ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ကျနော်မျိုးနားမလည်ပါ’ ‘မင့် အိမ်က စစ်သည်တော်များ ထိုးစစ်ဆင်လို့ ငါ့ရဲ့စစ်သည်တော်တွေ တစ်ကွဲတစ်ပြားစီးဖြစ်ကာ ကစင်ကလျား ထွက်ပြေးကြရတယ်။ ငါတောင် စစ်သည်များနှင့် ကွဲသွာလို့ ခု ဝေဠူဝန်ကျောင်းကို ရောက်လာတာလေ’ ဗိမ္မိသာရမင်းကြီး၏သား အဇာတသတ်သည် မင်းသားဘဝတည်းက ဖခင်နှင့်အတူ ဇောတိက အိမ်ကို လိုက်လည်စဉ်က ဇောတိက ကြွယ်ဝချမ်းသာမူကို သွားရည်ကျခဲ့သည်။ ဇောတိက ပိုင်ဆိုင်မှုများကို သိမ်းပိုက်ရန်ကြံစည်ခဲ့ဖူးသည်။ ဖခင်သတ်ပြီး မင်းဖြစ်လာသော အခါ သူရဲ့ ဖြတ်လမ်း သူဌေးဖြစ် လမ်းစဉ်ကို စတင် အကောင် […]
ရေးသားသူ – မာဂဓီ-သာစည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များက ရှင်သီဝလိကို ကိုးကွယ်ပူဇော်လျှင် အရောင်းအဝယ် ကောင်းသည်။ လာဘ်လာဘ ပေါများသည်ဟု ယုံကြည်ရင်းစွဲ ရှိကြသည်။ ယင်းသို့ယုံကြည်သည့်အလျောက် ရှင်သီဝလိပုံတော်ကို ထုလုပ်ကိုးကွယ်၍ အဆောင်ကောင်းအဖြစ် သွားလေရာသို့ ယူဆောင်သွားကြသည်။ ရှင်သီဝလိဆိုသည်မှာ လာဘ်လာဘ ဖွံ့ဖြိုးသော ရဟန္တာတပါးဖြစ်ကြောင်းကိုမူ အားလုံးက သိထားကြ၏။ ရှင်သီဝလိနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်းခဲ့သော ဆု၊ ပြုခဲ့သော ကုသိုလ်၊ ကျူးလွန်ခဲ့သော အပြစ်၊ စံစားရသော အကျိုးပေး၊ ခံစားရသော ဒဏ်ချက်များကိုလည်း အပြည့်အစုံ လေ့လာမှတ်သားဖို့ ကောင်းပေသည်။ ( တောင်းခဲ့သော ဆု)ရှင်သီဝလိ အလောင်းတော်သည် ပဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရား လက်ထက်တော်၌ လာဘ်လာဘအရာ၌ ဧတဒဂ်ဘွဲ့ ပေးခဲ့ရသော ရဟန်းတပါးကို အားကျပြီး ထိုဧတဒဂ်မျိုး ရလိုကြောင်း ပဒုမုတ္တရဘုရားထံ ဆုတောင်း၍ ပါရမီကို စတင်ဖြည့်ခဲ့လေသည်။ […]
“အဓိပ္ပာယ်သိရင် ပိုအစွမ်းထက်တဲ့ မေတ္တာသုတ်” (မြန်မာပြန်)
“အဓိပ္ပာယ်သိရင် ပိုအစွမ်းထက်တဲ့ မေတ္တာသုတ်” (မြန်မာပြန်) ပါဠိလို ဒီအတိုင်းရွတ်နေတာထက် အဓိပ္ပာယ်သိရင် ပိုအစွမ်းထက်တာကြောင့် မေတ္တာသုတ် (မြန်မာပြန်) ကို ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။ ပရိတ်တော်တွေကို အခေါက် ၁၀၀၀ ရွတ်တာထက် မြန်မာပြန်တစ်ခေါက်ဖတ်တာက ပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလို့ တင်ပေးလိုက်တာပါ။ “မေတ္တာသုတ် မြန်မာပြန်” နိဒါန်း ယသ- အကွငျမတေ်တာသုတျ ပရိတျတောျ၏၊ အာနုဘာဝတော- အာနုဘောျကွောင့ျ၊ ယက်ခာ- ဘီလူးတို့သညျ၊ ဘိံသနံ- ကွောကျမကျဖှယျသော အဆငျးကို၊ နဝေ ဒူနေ်တိ- မပွဝံကုနျ၊ ယမှိစဝေ- အကွငျမတေ်တာသုတျပရိတျတောျကိုသာလြှငျ၊ ရတ်တိဉ်စ- ညဉ့ျ၌ လညျးကောငျး၊ ဒိဝဉ်စ- နေ့၌လညျးကောငျး၊ မတန်တိတော- မပငြျးရိသညျဖွဈ၍၊ အာနုယုဉ်ဇန်တော- လုံးလပွုသောသူသညျ၊ သုခံ- ခမြျးသာစှာ၊ သုပတိ- အိပျရ၏။ သုတ်တောစ- အိပျပြောျသောျလညျးကိဉ်စိ- တဈစုံတဈခုသော၊ ပါပံ […]